Tsy vaovao amin'ny tovovavy sy ny vehivavy raha tsy misy fanoloran-tena: mahita ny ankizivavy iray mba hijanona
Tsy vaovao amin’ny tovovavy sy ny vehivavy raha tsy misy fanoloran-tena: mahita ny ankizivavy iray mba hijanona
Mazoto, fifaliana zazavavy. Mitady mahaliana interlocutor ho an’ny fifandraisana sy ny mpiray asa. City: Kiev, ny anarako dia Dasha, dia miaina ao Kiev, asa, fianarana. Tsotra, tsotsotra, fianarana, mahafatifaty, tsy mpirehareha, tsara fanahy zazavavy. Liana amin’ny fifandraisana maharitra amin’ny olona iray raha tsy misy ny fidirana an-tsehatry ny fiainana manokana. Ny olona nahita fianarana, manan-tsaina, manam-pahaizana. Mitady ny fifandraisana fototra momba ny fiaraha-miory, ny fanajana sy ny fikarakarana. Ny taona hentitra mifoka sigara, zava-pisotro, ny fanatanjahan-tena sy ny fifehezan-fampandrosoana no tsy tafiditra, nividy teo, tezitra, maranitra fihetseham-po tsy nitaredretra. Hivory hiaraka azo antoka, marani-tsaina sy ny tsara fanahy, ary avy eo dia nanjavona tanteraka. Mitady ny tsara, tsara fanahy sy malala-tanana olona izay hanampy ara-bola. raha toa Ianao ka eo ambany telo-polo taona, mba tsy manoratra. Aho mampihomehy tsara fanahy sy tantaram-pitiavana zazavavy tsy mifoka sigara ny fitiavana manana fotoana tsara. Mitady sponsor ny olona iray izay dia ho afaka ny hanao izany aho raha tsy izay tsy mandà. Ary mitovy ny toerana. Mitady olona ho an’ny voly sy ny fahafinaretana, ny fiaraha-mientana ifampizarana ny fiaraha-miory sy fanajana ny hafa. Momba ahy: fanatanjahan-tena, manan-tsaina, tsara.
Aho Christine. Miaina ao Berlin. Tsy ny maimaim-poana.
Fialam-boly: mendrika sy ny fiantrana. Mpanorina ny Vehivavy ny fiaraha-monina any Berlin. Mandeha amin’ny alalan’ny fampianarana, fanofanana. Tia travel (mandra Rosia) Vita ny fampianarana ambony. Drafitra mba hanomboka ny famokarana ny ankizy ny fitafiana, ny zava-nitranga fikambanana fanampiana ny ankizy sy ny sahirana. Mitady olon-dehibe olona iray dia ampy, sahaza tolo-kevitra. Ny fifandraisana izay tsy miorina afa-tsy amin’ny firaisana ara-nofo, fa koa amin’ny fanohanana na ny fialam-boly ny asa atao avy ao amin’ny efitrano fandrian. Izay mahaliana araka ny toetra, ny finiavana hanampy eo amin’ny asany, ary izany no antony rehetra voalaza etsy ambony Karmic fotoana. Aho tony sy fitiavana ny fialan-tsasatra ihany. Na dia indraindray aza ianao dia te handihy. Izaho manao solomaso. Ny sata ara-panambadiana dia tsy manan-danja, zava-dehibe ny toe-tsaina mendrika ho ahy. Tsy ny miavonavona, fa tsy hamela ny manambany. Te-hahita ny olona fa dia mora, tony, mendri-pitokisana. Fanohanana ara-bola. Ny vidin’ny saram-pianarana, fialam-boly, fiantsenana, fikarakarana manokana, ny raharaham-barotra.
Hi. Teraka sy mipetraka any Paris. Manana ny fampianarana ambony ao Philology, mahay tsara amin’ny telo teny vahiny (teny anglisy, alemana, espaniola) vao nanam-potoana ny dihy, ny fivoriana miaraka amin’ny namana, any amin’ny sinema, ny teatra, ny fampirantiana. Amin’ny andro orana tahaka ny hijanona ao an-trano amin’ny boky tsara.
Tiako ny mandeha
← Maimaim-poana ny manaitaitra ny firesahana amin'ny velona dia mampiseho
Hafahafa Toerana mba Hitsena ny Olona Izay Te-Fifandraisana →